REENOEMANN: ရီနိုမာန် ရဲ့ A to Z က ဒီလိုပါတဲ့ဗျာ
Posted by Ree Noe Mann at 11:00:00 PM
အေ၊ဘီ၊စီ၊ဒီ.....ပြန်လာ ကျက်သွား၏။း)
အဆင်ပြေ ပျော်ရွှင်ပါစေ ညီငယ်။
T = Taunggyi မြို့ ကို ချစ်တယ်ဆိုလို့ကျေးဇူးအရမ်းတင်ရှိပါကြောင်း...း)
တောင်ကြီးကို သွားဖြစ်အောင် သွားလည်ပါဦးနော်...
K= Karaoke ကို ဘာလို့ မုန်းတာတုန်းဗျ... တောင်ကြီးသွားရင် karaoke ဆိုတတ်မှ ကိုက်မှာနော်... ဟဟ
မောင်လေးရီနိုက American Idol ကို တော်တော် ခရေစီ ဖြစ်တာပဲ။ မဇွန်လည်း အရမ်းကြိုက်တယ်။ ၂၀၀၂/၃ လောက်က စကြည့်ဖြစ်တယ်။ ခုထိ ပုံမှန်ကြည့်နေကျ တီဗွီအစီအစဉ်တွေမှာ ထိပ်ဆုံးကပဲ။ ခုတော့ ပေါ်လာနဲ့ ဆိုင်မွန်လည်း မရှိတော့ နောက်နှစ်တွေဆို အရင်နှစ်တွေကလောက် ကြည့်လို့ အားရမယ် မထင်ဘူး။
အေ တူ ဇက် ရေးထားတာကို တစ်လုံးချင်း၊ တစ်ကြောင်းချင်း သေချာဖတ်သွားတယ်နော်။
I love to watch American Idol too and I hate karaoke without reason :) And I also love Taunggyi coz that's my mom's native. thanks for everything !!